Previous Article Gọọmenti Anambra Ga-Etinye Ijeri Naịra Iri N'Ọrụ Okporo Ụzọ – Obianọ
Next Article A Ga-Etecha Ụzọ Isekke–Mbọsị–Azịa–Ụkpọr Tupuu Oge Ùdú Mmiri – Obianọ
Ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ nke weere ọnọdụ n'ihu ụlọ akwụkwọ "National Open University of Nigeria," dị n'Abagana.
Dịka ndị ọnọ mgbe o mere siri wee kọọ, nwoke na-akwọ ya bụ ụgbọ òlòko jiri ya wee buru nwunye ya na ụmụ ya abụọ, wee na-efe ka nnụnụ, (e leghị anya n'ihi mmanya ma ọ bụ anwụrụ ike ọ ñụrụ), wee ruo mgbe ọ pụghị ịjide onwe ya ọzọ; o wee sukanye isi n'ebe a na-eregasị ihe dị n'akụkụ okporo ụzọ ahụ, wee kwọọ mmadụ abụọ zaa zaa. Ọtụtụ ndị dị iche iche nwètara mmerụ ahụ, ebe ọtụtụ ihe bụkwa ihe e bibìsìrì site na ya bụ ihe mberede; ma nwoke ahụ na-akwọ ya bụ ụgbọ oloko ka e kwuru na ọ nọgodi n'aka ndị ọrụ uwe ojii ugbu a.
N'okwu ya bànyere ihe mberede ahụ, onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Njikọka nke abụọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, bụ Maazị Pete Ibidà kọwara nke ahụ dịka nke jọgburu onwe ya, ma kpọkuo ndị na-akwọ ugbọala ka ha na-eji nwayọ, bèlata oke ọsọ, na-adị n'ịkwọ ụgbọala ha, ma na-aghọtakwa na o nwere ndị ọzọ na-agbakwa na ya bụ ụzọ, iji wee bèlata oke ihe mberede okporo ụzọ.
Otu ọ dị, ndị ụlọ ọrụ 'Anambra Traffic Management Agency' (ATMA) enyela aka bupù ozu ndị ahụ nwụrụ anwụ, bupù 'Keke Na Peep' na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụgbọ oloko ahụ tigwòsìrì, tinyere ya bụ ụgbọ oloko n'onwe ya, iji me ka ụzọ gaa.